Ahoana ny fomba hitsidihana an'i Saudi Arabia avy any UAE, Afrika Atsimo, Arzantina indray?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » Ahoana ny fomba hitsidihana an'i Saudi Arabia avy any UAE, Afrika Atsimo, Arzantina indray?
Airport • Vaovao Mafana Arzantina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Safety • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Nanainga ny fandraràna ny fivezivezena ny Saodiana
Ilay Fanjakana Arabia Saodita nikatona sy tsy takona afenina izao dia fantatra fa firenena mpizaha tany indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Mandray ny laharana voalohany amin'ny fitarihana fizahan-tany manerantany ny firenena.
Androany ny Ministeran'ny Atitany Saodita dia nanamafy fa hanokatra ny fanjakana amin'ny mpifanolobodirindrina aminy izy, ny Emira Arabo Mitambatra, ho any Afrika Atsimo, ary i Arzantina.
Avela handeha eo anelanelan'ny Fanjakana Saudi Arabia sy Emirà Arabo Mitambatra, Afrika Atsimo ary Arzantina indray ny dia amin'ny alarobia 8 septambra.
Ny fanapaha-kevitra hanafoana ny fandrarana ny fivezivezena dia mifototra amin'ny fanombatombanana ny toe-javatra COVID-19 amin'izao fotoana izao ao amin'ny Fanjakana, hoy ny fanazavan'ny Minisitera.
Nanambara ny minisiteran'ny atitany fa ny fomba hampiatoana ny aretina COVID-19 tsy hiparitaka dia ny fanohizana ny fepetra fisorohana, toy ny fanaovana sarontava, ny fanalavirana ny fiaraha-monina ary ny fanadiovana.
Hatramin'ny talata 7 septambra 2021 dia 138 ny tranga vaovao an'ny COVID-19 ary olona 6 indray no matin'ny coronavirus. Hatreto dia 545,505 ny tranga voaray ary olona 8,591 XNUMX no maty.
Inona no ataon'ny Fanjakana ankehitriny?
Amin'izao fotoana izao, Arabia Saodita dia manosika fanentanana fanaovana vaksiny mba hahatratrarana herisetra andiany 70% amin'ny olona voatanisa tanteraka. Hatreto, ny firenena dia nahatratra 45% inoculated manontolo sy 63% izay nahazo ny fatra voalohany. Vinavinain'ny governemanta ny fahazoana tsimatimanota omby amin'ny voalohan'ny volana novambra.
Ho fanampin'ny programa fanaovana vaksiny dia nanangana ivon-toeram-pitsapana sy ivon-toeram-pitsaboana ity firenena ity, izay manampy olona an'aliny.
Vao iray volana sy tapany lasa izay
Tamin'ny faran'ny volana Jolay 2021, Arabia Saodita dia nametra fandrarana 3 taona ho an'ny olom-pireneny raha toa ka manitsakitsaka ny fandrarana napetraka izy ireo ary mandeha any amin'ireo firenena amin'ny "lisitra mena" an'ny Fanjakana. Ho fanampin'ny fandrarana mandritra ny 3 taona dia apetraka ny sazy mavesatra rehefa miverina.
Tafiditra ao anatin'io lisitra fandrarana ny dia io ireo firenena nesorina rahampitso - UAE, Afrika Atsimo, ary Arzantina.
Inona no takiana mba handehanana any Arabia Saodita?
Tamin'ny 1 Aogositra 2021, Misokatra amin'ny mpitsidika iraisam-pirenena vita vaksiny i Saudi mandeha amin'ny visa fizahan-tany. Ireo mpitsangatsangana koa dia mila manana fiantohana COVID-19 mandritra ny Fanjakana. Ny vidin'ity fiantohana ity dia hampidirina ao amin'ny sarany ho an'ny visa mpizahatany. Hanamarina ny fahafahan'ny firenena handray ny programa eVisa amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny lisitra ao Pejy VisaSaudi. Ny firenena rehetra tsy voatanisa dia afaka mangataka visa ho an'ny mpitsangatsangana amin'ny alàlan'ny masoivohon'i Saudi Arabia akaiky azy indrindra amin'ny alàlan'ny www.mofa.gov.sa
Ny mpitsidika rehetra tonga eto amin'ny firenena miaraka amin'ny visa fizahan-tany manan-kery dia tsy maintsy manome porofo iray amin'ny iray amin'ireo vaksinina 4 ekena ankehitriny: dosie 2 amin'ny vaksinin'ny Oxford / Astra Zeneca, Pfizer / BioNTech na Moderna, na iray fatra amin'ny vaksinina novokarina nataon'i Johnson sy Johnson.
Ny vahiny izay nahavita fatra roa tamin'ny vaksinin'ny Sinopharm na Sinovac dia horaisina raha nahazo doka fanampiny amin'ny iray amin'ireo vaksiny efatra nankatoavina tao amin'ny Fanjakana izy.
Arabia Saodita nanokatra vavahady web ho an'ireo mpitsidika hisoratra anarana ny satan'ny vaksiny. Hita amin'ny arabo sy anglisy ny tranokala.
Ireo mpitsangatsangana tonga any Arabia Saodita dia takiana ihany koa mba hanome fitsapana PCR ratsy tsy vita mihoatra ny 72 ora alohan'ny fiaingany sy ny taratasy fanamarinana ny fanaovana vaksiny taratasy, izay nohamarinin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ofisialy ao amin'ny firenena namoaka.
Tsy misy fepetra takiana amin'ny quarantine ho an'ireo mpandeha vaksiny mankany Saudi Arabia.
Ny mpandeha rehetra miditra amin'ny visa fizahan-tany navoaka teo aloha dia takiana mba handoa sarany fanampiny SAR 40 ao amin'ny seranam-piaramanidina fahatongavan'izy ireo mba hiantohana ny fiantoham-bola amin'ny vidin'ny fitsaboana COVID-19 mifandraika amin'izany.
Manoro hevitra ireo mpandeha mba hijery ireo takiana fidirana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny kaompaniam-pifidianany alohan'ny hividianany tapakila.
Iza no mbola ao amin'ny "lisitra mena?"
Ny famoahana ireo firenena 3 hoesorina amin'ny lisitra rahampitso, ireto firenena manaraka ireto dia tsy afaka mandeha vetivety any amin'ilay Fanjakana:
For more information, contact help.visitsaudi.com.